မန်းကျောက်စိမ်းဈေးကွက်တွင် ကျောက်စိမ်းအသစ်များ ဝင်ရောက်မှုနည်းနေသောကြောင့် ကုန်ကြမ်းအတ?? - Yangon Media Group
မန္တလေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၆
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့၏ အဓိက ကျောက်စိမ်းဈေးကွက်ဖြစ်သော မဟာအောင်မြေကျောက်မျက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းတွင် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တရုတ်ဝယ်လက်များ ဝင်ရောက်မှုများပြား နေသော်လည်း ကျောက်စိမ်းအသစ်များ ဝင် ရောက်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်နေသောကြောင့် ကုန်ကြမ်းအတိုင်းသာ ရောင်းချမှုပိုမိုများပြားလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
”တရုတ်ကုန်သည်တွေတော်တော်များများက ပစ္စည်းကောင်း အသစ်တွေရှာဖွေနေပေမယ့် လက်ရှိမှာနေပြည်တော်ကျောက်စိမ်းပြ ပွဲကကျောက်တွေက ဈေးကွက်ထဲကို ပြန်လည်မဝင်ရောက်လာသေး တဲ့အတွက် ကျောက်စိမ်းအဟောင်းတွေနဲ့ပဲ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ် နေကြရပါတယ်။ ခဲကြောင်းအလိုက်သာ ဈေးစပ်ပြီးရောင်းချတဲ့ သူက ပိုများနေပြီး လွှာချပ်အဆင့်အထိလုပ်မယ်ဆိုရင် တခြားကုန်ကျစရိတ် တွေ ထပ်ရှိလာနိုင်တာရယ်၊ ရနိုင်မယ့်ဈေးနှုန်းကလည်း သိပ်မကွာတာ ရယ်ကြောင့် ကုန်ကြမ်းအတုံးတွေအနေနဲ့ပဲ ရောင်းချလာခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။ အပွင့်ကောင်း၊ အပွင့်လှတွေကို တရုတ်ကုန်သည်တွေက သေ ချာစစ်ဆေးပြီးမှသာ ကြိုက်ဈေးပေးကြပါတယ်”ဟု မဟာအောင်မြေ ကျောက်မျက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းမှ ဝါရင့်ကျောက်စိမ်းကုန်သည် ဦးသန်းမြင့်က ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြော ကြားသည်။
စခန်းအတွင်းရှိ ပုံမှန်အတိုင်းရောင်းသူဝယ်သူများဖြင့် စည်ကား မှုရှိနေခြင်းဖြစ်ရာ ကုန်ကြမ်းအတုံးများကို အဓိကဦးစားပေးရောင်း ဝယ်နေသောကာလဖြစ်သဖြင့် ကျောက်စိမ်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ဖြတ်ခုံ၊ ဖောက်ခုံနှင့်သွေးခုံလုပ်ငန်းရှင်များတွင် နေ့စဉ်အပ်ထည်အနည်းငယ်သာရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားသားခရီးသည် များနှစ်သက်သဘောကျသည့် ကျောက်စိမ်းပုတီးများနှင့် လက်စွပ်၊ လက်ကောက်၊ လည်ဆွဲကဲ့သို့ ဖန်စီပစ္စည်းများကို ပိုမိုမှာယူရောင်းချမှု များရှိနေပြီး ဘုရားဖူးရာသီဖြစ်၍ ပြည်တွင်းဝယ်လိုအားကောင်းနေ ကာ နေပြည်တော်ပြပွဲမှ ကျောက်စိမ်းများဝင်ရောက်လာပါက ဈေးကွက်ယခုထက် ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ- တရုတ်နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ကုန်စည်ပြပွဲကို တရားဝင် ကျင်းပမည့် ရက်ထက် လေးရက် တိုးပြသမည်
ငမိုးရိပ်ချောင်းဘေး တစ်လျှောက်တွင် အပန်းဖြေနေရာများ ဖော်ဆောင်ရန် စီစဉ်နေဟုမြို့တော်ဝန် ဆ?
ရှစ်လေးလုံးပါတီ အမည်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပါတီဖြစ်မြောက်ရေး တာဝန်ခံများ ဧပြီ ၁ ရက် တွေ့ဆုံဆွေး
လူထုဒေါ်အမာ၏ (၁ဝ၂) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲ မန္တလေး၌ ကျင်းပ
ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်ဆွေဦး၏ အသက် ၈၅ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကျင်းပ
အမျိုးသားရေး စကားလုံး ပေါပေါလောလော ဖြစ်လာ၊ မျိုးချစ်ဆိုသူတို့ တရားရင်ဆိုင် ထောင်ကျခဲ့ပါက ??
ရေဦးဘူတာရုံတွင် လူစီးရထားပေါ် ပြင်ပဒဏ်ရာမရှိဘဲ အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးနေ
မြန်မာ – အိန္ဒိယနယ်စပ် ကလေး၊ တမူးဒေသသို့ ကွမ်းရွက် အဝင်များသော်လည်း အိန္ဒိယဘက်မှ ဝယ်ယူမှု နည်း??